Foomka Xiriirka Bots Spam
Talaado, Oktoobar 26, 2010 Sabtida, Oktoobar 18, 2014 Nick Carter
Anti-spam waa mowduuc weyn oo leh emayl. Dadku waxay isku dayayeen inay sanduuqooda sanduuqa nadiif ahaadaan sannado badan wax kasta oo laga xanaaqo fowdo aaladaha sifeeyaha junk-mail-ka ee fudud oo ay la socdaan awooddooda sixirka ee been-abuurka ah. Xaqiiqdii, farriinta emailka ayaa noqotay mid dhib badan oo xitaa dowladdu ku dhaqaaqday (qiyaasi taas) oo ay qortay sharciyo ku saabsan. Laakiin waxaa jira hal nooc oo ah spam oo wali u taal feejignaanta inay soo qabato… waxaana rajeynayaa inaad i caawin doontid.
Waxay ku bilaabatay sidii xanaaq uun, laakiin waxay ku soo kordhay carqaladeynta ganacsiga oo dhan. Foom kasta oo la soo gudbiyo wuxuu si toos ah u kiciyaa hoggaanka CRM-ga. Taas oo macnaheedu ahaa in sanadkii la soo dhaafay ama wax la mid ah, waxaan haystay waxyaabo badan oo horseedyo ah oo aan ka iibiyo shirkadaha SEO ee iga heli kara bogga 1 ee Google. Marka, waxaan u dhaqaaqay inaan abuuro foom gacmeed sameeyaha guryaha kaas oo bilaabi doona in la aqoonsado lana baabi'iyo kuwan sharwadayaasha ah HALISTA khatarta been-abuurka ah. Sababtoo ah, ka dib oo dhan, intaan necbahay spam, waxaan necbahay fursad lumisay xitaa intaa ka sii badan.
Si aan u bilaabo, waxaan kariyey noocyada spam ee aan macquul ahaan u baabi'in karo illaa laba qaybood:
Aadanaha dhabta ah ee soo gudbiya xog qaldan kaliya si uu ugu tago buskudka ka dambeeya foomka trial tijaabada bilaashka ah, warqadda cad ee bilaashka ah, suuqgeynta faleebo content, iwm.
Bootooyinka ku gurguurta webka gudbinta xiriiriyeyaasha ku xiran iyo xogta khaldan foom kasta oo ay heli karaan.
Sidoo kale, iyada oo qayb ka ah mashruucan iskaashiga yar (oo aad ku biiri karto adoo ka dhiibanaya faallo halkan) aan ku daro halbeegga soo socda: MAYA CAPTCHA. Anigu ma akhriyi karo waxyaalaha digaagga ah aniga lafteyda waqtiga badhkiis waxaana jira sabab aan uga baqo in CAPTCHA lafteeda ay yareyso beddelidda macdanta iyada oo loola jeedo dhib keli ah.
Marka, xeeladdu waa in la abuuro taxane tijaabooyin macquul ah oo ka dhan ah kaas oo socodsiin kara foomka la soo gudbiyay ee si hufan u tilmaami doona spam boqolkiiba aad u muhiim ah waqtiga halka ku dhowaad aan waligood xannibin hoggaanka sharciga ah.
Halkan waa halka aan joogo:
Geli gelinta foomka, nooca = qoraalka, laakiin qaabka = ”muujinta: midna;”. Bots-ku wuxuu si dabiici ah u durayaa qiime qayb kasta oo qoraal galinta ah si loo dhaafo jeegaga goobta looga baahan yahay. Si kastaba ha noqotee, haddii qaybtan gaarka ah la soo gudbiyo iyada oo xog ku jirta, waxaan ku ogaan karnaa hubaal in bini aadamku uusan sameynin.
Hubi "asdf." Si fudud, waan ogahay, laakiin warbixin ku saabsan spam taariikhi ah ayaa muujisay in tani ay ahayd qaab caan ah oo loo soo gudbiyo been abuur ah. Haddii xariga asdf uu ka muuqdo goob kasta, waa spam.
Hubi jilayaasha soo noqnoqda. Waxaan isku dayay oo aan isku dayay, laakiin kama fikiri karin sabab macquul ah oo ah in dabeecad kasta ay ku celceliso in ka badan 3 jeer magac, magac shirkadeed, ama cinwaan cinwaan. Haddii aad si kale ii qancin karto, wey fiicantahay. Imika, "Shirkada la tashiga ee XXXX" ma noqon doonto hogaamiye aniga.
Hubi xarig isku mid ah. Marka laga reebo deriska Tim Allen, Wilson Wilson, qofna ma aqaano inuu isku qiimo ku fadhiyo dhammaan qeybaha foomka xiriirka. Haddii aagag badan ay isku mid yihiin, waa spam.
Ugu dambeyntii, tanina waa fure: hubi URL meesha aysan ka tirsanayn. Mid ka mid ah kiisaska ugu caansan ee spam waa in la dhigo URL aag aan ku jirin. Banaanka sanduuqa “farriinta” aag-bannaanka, URL waa inaan loo isticmaalin magaca qofka, lambarka taleefanka, magaca shirkadda, ama haddii kale. Haddii ay isku dayaan, waa spam.
Kuwani 5 imtixaanada macquul ah ayaa hoos u dhigay gudbinta spam by si fiican u badan 70% bishii la soo dhaafay on our foomka xiriirka oo bilaash ah alaabta Waxaan jeclaan lahaa inaan helo tiradaas xitaa intaas ka sii badan. Tirada ugu badan ee gudbinta spam ee wali si dhuumaaleysi ah u soo bandhigeysa ayaa si xun u caanbaxday SEO. Marka, halkan waa caqabadda xigta: Miyaad la imaan kartaa taxane ereyo muhiim ah iyo xaddiga cufnaanta oo si macquul ah u tilmaamaysa waxyaabaha gudbinta ay ka hadlayso SEO? Dabcan, tani waxay fikrad xun u noqon kartaa ragga ku jira SlingShot inay ku hirgeliyaan bartooda, laakiin inteena kale, way ku habboonaan lahayd.
Soo-saareyaasha websaydhku way midoobaan: maxaa kale oo la baarayaa?
Tags: Botsfoomka xiriirka xiriirkafoomka spamspam
Oktoobar 26, 2010 at 3:59 PM
Waxaan gabi ahaanba jeclahay fikradda ah in lagu daro goob muuqaal leh: midna. Waa xariifnimo! Waxaan qoray qoraal bilooyin badan ka hor oo ku saabsan sida ay u xun tahay tiknoolajiyada Captcha… waxay ciqaabtaa kuwa aan waxba galabsan waxayna ku darsataa talaabo dheeraad ah oo aan loo baahnayn oo loogu talagalay dadka isticmaala. Waa ka soo horjeedka khibrada isticmaale. Waxaan tijaabin karaa beertaada qarsoon!
Oktoobar 26, 2010 at 4:00 PM
Oktoobar 27, 2010 at 5:06 AM
Runtii si fiican ayey u shaqeysaa, laakiin haddii aad ku soo rogto foomamka jira waxay qaadan kartaa in muddo ah saamaynta in lagu faafiyo. Bots-ka ayaa badanaa keydiya foomkaaga oo ku dhajiya sidii ay u arkeen toddobaadyo ka hor illaa ay ka soo laabtaan oo ay mar kale arkaan. Marka, illaa iyo inta ay ku dhajinayaan foomka keydkaaga, way ka gudbi doonaan. Muddo bil gudaheed ah, waa inaad bilowdaa inaad aragto natiijooyinka.
Jan 10, 2011 saacadu markay ahayd 8:38 PM
2. Way adag tahay in la qiyaaso foomamka magacyada goobta;
3. ansaxinta foomka server-ka;
4. foom aan la fileyn inuu qiime leeyahay;
# 1 waa kan aan ugu jeclahay. Bilow saacad sida ugu dhakhsaha badan ee xiriirka (ama bog kasta) bogga la rakibo. Dhinaca serverka waxay u dejisay waqti loo baahan yahay si loo buuxiyo foomka. Haddii si dhakhso leh loo soo gudbiyo, isticmaalaha ayaa arki doona farriin / xisaab naafo / maamul ah oo helaya iimayl / iwm. Midkani dhab ahaantii wuxuu tirtirayaa 99.9% nooc kasta oo nashaadaad bot ah.
# 2 magacyada dukaan kaydinta kalfadhi oo u bixi beeraha magacyo nasiib ah. Waxay ku adkeyneysaa bot inuu barto.
# 3 kan ayaa muhiim ah. Emailka waa la xaqiijin karaa si sax ah w / tibaaxaha caadiga ah, aag lambar taleefan ayaa loo maleynayaa inuu ka kooban yahay 10 lambar, 2 ama in ka badan oo w / w / isla qiime = bot, iwm.
# 4 lagu sharaxay maqaalkaaga, 5 iyo 6 xoogaa xulashooyinka qoraalka ah.
Waad ku mahadsantahay boostada, Nick. Mahadsanid saamiga.
Martin - Waxaan u maleynayaa in saacaddu tahay fikrad aad u fiican. Waxaan u maleynayaa in bot uu soo dhex mari doono oo marinku xoogaa wuu yaraa… laga yaabee 5 ilbidhiqsi? Kaliya waan xiiseynayaa sababtoo ah foomam horay loo soo buuxiyey oo loogu talagalay dadka isticmaala dhabta ah iyo sidoo kale dadka isticmaala ee ku soo noqda bogga isla markaana isla markiiba ogaada inay doonayaan inay buuxiyaan foomka. kaliya labadayda dinaar. Waan ogahay inaan ahay sanad ku soo daahay qoraalkan sidaa darteed aanan fileynin wax badan jawaab, kaliya waxaan u dhigayaa rajo 🙂